သေတ္တာတစ်လုံး၌ဘုရားသခင် - ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > တစ်သေတ္တာထဲမှာဘုရားသခင်ကို
မင်းကအရာရာကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပြီးနောင်မှစိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတာမင်းစဉ်းစားဖူးလား။ ရှေးဟောင်းစကားပုံအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ မည်မျှကြိုးစားရမည်ကိုအခြားအရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်ပါကညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေအဆင့်တိုင်းကိုဂရုတစိုက်ဖတ်တယ်၊ နားလည်တာအတိုင်းလုပ်ပါ၊ အဲဒါကိုမှန်ကန်တဲ့အရာမဟုတ်လို့ပြန်လုပ်ပါ။
ဘုရားသခင်ကိုနားလည်တယ်လို့သင်ထင်သလား။ ငါလုပ်ပြီးငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ် ငါဘုရားကိုသေတ္တာတစ်လုံးထဲမှာမကြာခဏထားလေ့ရှိတယ်။ သူကဘယ်သူလဲ၊ သူဘာလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူ့ချာ့ချ်ကဘယ်လိုပုံမျိုးဖြစ်သင့်တယ်၊
ခရစ်ယာန်များနှင့်ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောလူ (၂) ယောက်သည်ဘုရားသခင်အားသေတ္တာတစ်လုံးတည်းတွင်ထားရှိပါသလား။ ဘုရားသခင်အားသေတ္တာထဲတွင်ထည့်ခြင်းသည်သူ၏အလိုတော်၊ သဘောသဘာဝနှင့်စရိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်ဟုထင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဘဝနှင့်လူသားအားလုံးအတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်သည်ဟုထင်သောအခါလေးထောင့်ကွက်ပေါ်၌လေးကိုတင်လိုက်သည်။
စာရေးဆရာ Elyse Fitzpatrick ကသူမ၏ Gods of the Heart စာအုပ်တွင်ရေးသားထားသည်မှာ - ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုမသိခြင်း၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပါမယ်။ ဒီလူတွေဟာဘာသာတရား၊ အဝိဇ္ဇာနှင့်အမှားများကကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အားသေတ္တာထဲသို့ပို့ဆောင်စေသည်။
ငါဥပမာမပေးချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရောငါရောငါနဲ့ငါ့ချာ့ချ်ကအဲဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာငါရော၊ ငါပါသိတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မြင်သည်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အခြေအနေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုထင်ရသည့်အဝိဇ္ဇာနှင့်အမှားများကိုဘယ်တော့မျှဖယ်ရှားပစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လေးကိုချည်ရန်၊ တိပ်ခွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရမယ်၊ ထုပ်ဖို့စက္ကူကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသေတ္တာကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုငါအာရုံစိုက်ချင်တယ်။ လေးကိုဖယ်ရှားပါ - ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝကိုလေ့လာပါ။ သူဘယ်သူလဲ? ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဇာတ်ကောင်ဘာတွေလဲ? ကျမ်းစာမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါ။ တိပ်ခွေကိုဖယ်ရှားပါ - သမ္မာကျမ်းစာပါယောက်ျားမိန်းမများအကြောင်းလေ့လာပါ။ သူတို့အတွက်အဘယ်ဆုတောင်းချက်များကိုကိုယ်တော်ဖြေကြားခဲ့သနည်း။ ထုပ်ပိုးထားသောစက္ကူကိုဖွင့ ်၍ မျက်ရည်များကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ သင်၏ဘ ၀ ကိုကြည့်။ သူအလိုတော်နှင့်အဘယ်သို့သူနေထိုင်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။ သံသယမရှိဘဲ, သူ့အစီအစဉ်ကိုသင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။
သေတ္တာကိုဖွင့်ပါ - သင်ကအရာအားလုံးကိုမသိဘူး၊ သင့်ဘုရားကျောင်းကအရာရာမသိဘူးဆိုတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံပါ။ ငါ့နောက်မှထပ်ခါတလဲလဲ: ဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးငါမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်သဘာ ၀ ကျဆင်းမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်တီးရန်စိတ်သဘောထားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်အတွေးအခေါ်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပုံဖော်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံယူကြပါစို့။ သူ၏အကူအညီဖြင့်သေတ္တာကိုဖွင့ ်၍ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။